Nahoana no fitsapana?
“Ary hipetraka handrendrika sy hanadio volafotsy Izy; eny, hanadio ny tarank’i Levy Izy sy handerndrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy, ka dia ho an’i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra amim-pahamarinana. “Mal. 3:3
Indro ny fomba ny fanadiovana , ny fomba fanalana tain-drendrika, izay hataon’ny Tompo Tsitoha. Miezaka mafy ho an’ny fanahy ny asa, saingy amin’ny alalan’io fomba io irery ihany no hahafahana manaisotra ny fakofako sy ny fahalotoana manimba. Ilaina avokoa ireo fitsapana antsika mba hitondra antsika hanakaiky kokoa ny Raintsika izay any an-danitra, amin’ny fankatoavana ny sitrapony, izay hahafahantsika manolotra fanatitra amin’ny fahamarinana ho an’ny Tompo. Nanome faiza-manao, talenta hampitomboina ho an(ny tsirairay avy amintsika Andriamanitra. Mila fanandramana vaovao sy velona amin’ny fiainana any ambony isika, mba hahafahana manao ny sitrapon’Andriamanitra. Tsy misy fatran’ny fanandramana tamin’ny lasa ampy hiatrehana ny anio, na hampahery antsika mba handresena ireo fahasarotana eo amin’ny lalantsika. Tsy maintsy manana fahasoavana vaovao sy hery nohavaozina isan’andro isika mba handresena (...)
I Abrahama , i Mosesy, i Elia, i Daniela , sy ireo maro hafa, dia nosedraina mafy, saingy tsy tamin’ny fomba mitovy. Ny tsirairay dia nanana ny fitsapana sy ny fisedrana azy manokana teo amin’ny lalam-piainana , saingy mahalana tokoa no misy fitsapana miverina indroa. Ny tsirairay amin’ireo dia manana ny fanandramany, manokana amin’ny toetrany sy ny zava-miseho, mba hanatanterahana asa. Manana asa iray, tanjona iray Andriamanitra, eo amin’ny fiainan’ny tsirairay avy amintsika rehetra. Ny hetsika rehetra, na dia kely aza, dia manana ny toerany (...)
Aoka ny rehetra hahatsapa fa ny dingana tsirairay izay ataon’izy ireo dia misy fiantraikany maharitra sy mifehy eo amin’ny fiainan’izy ireo sy ny toetran’ny hafa. O, akory re araka izany, ny haben’ny filana ny firaisana amin’Andriamanitra! Endrey ny filana ny fahasoavana avy any ambony mba hitarika ny dingana tsirairay , ary haneho amintsika ny fomba hanatanterahana ireo toetra kristianina.
Hisy zava-baovao sy fitsapana vaovao hatrany holalovan’ny kristianina , rehefa tsy afaka ny ho tonga mpitarika ampy ireo fanandramanytamin’ny lasa. Mila mianatra amin’ilay Mpampianatra avy any ambony isika anio toy ny amin’ny fotoana rehetra amin’ny fiainantsika , ary mihoatra noho izany aza. Ary arakaraka ny hahazoantsika fanandramana vaovao , no hanakekezantsika kokoa ny fahazavana madion’ny lanitra , ary hahaizantsika manavaka bebe kokoa ao amin’ny tenantsika izany filana fanavaozana izany (...). Ny lalan’ny marina dia fandrosoana hatrany , avy amin’ny hery ho amin’ny hery, avy amin’ny fahasoavan ho amin’ny fahasoavan, avy amin’ny voninahitra ho amin’ny voninahitra. Hitombo hatrany hatrany ny fitsilovana avy any ambony, mifandraika amin’ny hetsika fandrosoantsika , mahatonga antsika ho afaka hiatrika ireo andraikitra sy zavatra maika manoloana antsika.